Ametraham-panontaniana indray ny zo hitantara : Kiobàna mpanao gazety, iharan’ny tsindry ataon’ny mpitondra · Global Voices teny Malagasy
Matoandahatsoratry ny "Periodismo de Barrio"
Voadika ny 27 Oktobra 2019 17:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Ελληνικά, Español
Aloka. Saripika an'i Felko. Natolotry ny Periodismo de Barrio ary nahazoana alàlana tamin-dry zareo ny fampiasàna azy.
Ity lahatsoratra ity dia vokatry ny fiarahana miasa amin'ny gazety an-tambajotra kiobàna Periodismo de Barrio [gazetim-bohitra]. Noho io fifanomezan-tànana io, ho azon'ireo mpamakay anay atao ny mahafantatra firenena hafa noho izay efa fanolotr'ireo gazety mahazatra.
Atolotry ny mpamily azy ny antontan-taratasiny no sady manontany izay mety ho olana. Miteny ireo polisy fa naharay fitarainana mikasika halatra tao Goatemalà ry zareo, tao amin'ny vohitra iray ao anatin'ny faritanin'i Holguín izay niroborobo tokoa tamin'ny fotoan'androny, saingy ankehitriny, efa tsy misy afa-tsy fahasimbàna sy ireo rovidrovitry ny lasàny sisa. Ao anaty fiara i Jesús Jank Curbelo, manangom-baovao sy vehivavy iray mpakasary. Mangataka azy ireo hivoaka ny fiara ireo polisy. Savainy ilay mpanagom-baovao fa ilay mpakasary kosa mangataka mba ho vehivavy no hanao ny fisavàna azy, noho izany tsy misy olona mikitika azy. Entin'izy ireo ry zareo Milaza amin'izy ireo ny polisy iray fa hatao fanadihadiana ry zareo momba ilay halatra satria ny famariparitana rehetra momba ireo nahavanon-doza dia mitovy amin-dry zareo. Avy eo, dimy ambinifolo minitra fahanginana mandra-pahatonga tany amin'ny birao tao Mayarí.
Nivahiny andro telo tany Goatemalà ireo mpanao gazety ireo. Te-hitantara. Ilay rangahy niresaka efa ho taminà olona am-polony mahery, ary an-jatony maro kosa ny sary nopihan'ilay ramatoa : fanambanin'ny ranomasina, ireo faharavàna tao amin'ny ozinina iray famokarana siramamy, ary ireo faharavàna tany amin'ny toerana sisa rehetra tany, sarin'olona. Nanànany tao anatin'ny fitaovany fakantsary daholo ireo, fitaovana izay nalain-dry zareo teny aminy fony nivoaka avy tao anaty fiara, niaraka tamin'ireo antontan-taratasy momba azy sy ny telefaona findain-dry zareo.
Feno afisy lehibe iray midehaka eo amin'ilay birao “Ny polisy tsara indrindra eto an-tany” ary sarin'ireo olona manjoretra sy mivoa-drà tany alohan'ny 1959, rindrina manga maloto, ary polisy iray mpamaly antso an-telefaona, seza be iray sy sezalava vitsivitsy, toeram-pidiovana maizimaizina sy maloto manakaiky ny baravy manolotra mankamin'ilay efitra kely fanibohana sy ny biraon'ilay polisy mpiandry raharaha. Tohatra iray no mitondra mankany amin'ny efitrano iray hakàna am-bavany azy ireo atsy aoriana kely. Hatreto aloha, mipetraka ry zareo. Mangataka rano, dia valinteny azon-dry zareo ny hoe tsy maintsy miandry fa mbola ho alina rehefa fotoana fisakafoanana. Mangataka ny hifoka sigara ry zareo, saingy ambara azy ireo fa tsy azo atao izany. Manontany ora; amin'ny efatra ora tolakandro. Ery am-pidirana, misy ireo polisy miditra sy mivoaka ary tsy mitsahatra ny mijery ao anatin'ny findain-dry zareo. Indraindray, mandray fitarainana ry zareo: misy olon-droa nisy nangalatra tany anaty taxi ny kitapo nentiny, vehivavy iray no mitaraina satria misy jiolahimboto mandrahona ny zanany lahy. Indraindray, misy fianakavian'ny voatàna tonga manatona ao.
Lobaka misoratra makarakara sy jean miloko antitra no teny amin'i Major Damián Arcos. Mpanampy efa antitra sy miolankolana izay i Major Nelson. Miakatra ny tohatra ry zareo. Rehefa nantsoin'izy ireo i Jesús Jank, manomboka eo ny ady ara-tsaina sy ny fakàna am-bavany kidaladala, satria avilan-dry zareo tanteraka ny valinteny mandra-piafara amin'ny hoe resy lahatra ry zareo fa nahazo izay valinteny notadiaviny. Na raha tsy izay, averimberiny eo foana ireo fanontaniana, ka raha toa miaka-pofona kely, na mampiaka-peo na mazan-doha manoloana azy ireo, lasa izao : miditra ! Alain-dry zareo am-bavany izy momba ny famatsiambola raisin'ny Periodismo de Barrio sy ny tanjony, ary anontanian-dry zareo raha toa izy ka tonga saina tsara hoe ny fanaovana ny asa izay ataon-dry zareo io “dia fanomezana fitaovampiadiana ho an'ny fahavalo”. Nahoana no i Goatemalà ? Dia valian'i Jesús Jank fa batey [fr] iray manana tantara tsara sy mendrika ny ho tantaraina io. Izay tsy takatr'izy ireo tsara ny tiany hambara, dia ny hoe ny famoriambola atao eny ifotony, tsy araka izay lazain'izy ireo, dia tsy orinasa amerikàna, ary ny mpanao gazety iray dia tsy hoe fotsiny karatra iray sy fanomezandàlana iray omen'ny Antoko Kaominista na koa laharam-boninahitra monja ihany. Ilay mpakasary koa, ezahan-dry zareo ny hampisavoritaka ny sainy amin'ny fanotofana fanontaniana, saingy tsy rototra ramatoa io mamaly – izy, ilay mpianatra – na dia lazain-dry zareo azy aza fa io “gazety kely”, Periodismo de Barrio, io dia mampiasa azy, na rehefa rahonan-dry zalahy ho roahana ao amin'ny ajerimanontolo izy.
Rehefa naneno ny tamin'ny enina ora hariva, tsy nisy na iza na iza nahatsiaro intsony ny momba ilay resaka halatra lazaina fa nitranga tao Goatemala, ary dia revo miambina an-dry zareo izy rehetra, i Major Damián amin'izany miditra sy mivoaka ny birao. Ora maro izy ireo no mitorevaka mipetraka eo amin'ilay birao, mijery ny fiavian'ny alina. Rehefa tonga ny alina, jeren'i Major Nelson tsirairay ireo sary tao anatin'ny fakantsary, manoloana azy ireo, manontany antsipirihany momba ireo olona tsirairay hitany tao, ny mety ho dikan'ireo sary mahatsiravina / mampitaintaina nopihana tao Goatemalà. Avy ao izy mibaiko an'i Jesús Jank hiakatra eo ambony moto hiaraka amin'i Major Damián. Dia tonga tao amin'ny trano niantranoany ry zareo, iray kilaometatra eo ho eo miala an'ilay birao.
Mamoha varavarana azy ireo ny tompontrano, somary taitra, satria efa reny tamin'ny zanany lahy, izay namily ny fiara hatrany Goatemalà, ny momba ilay tantara mikasika ilay halatra noforomporonina. “Misy fanalahidin'ny efitrano ve any aminao ?”, hoy ny Major mantsy azy no sady narantirantiny ny karatra avy amin'ny ministeran'ny atitany. “Eny, mazava loatra”, hoy ilay rangahy mamaly. Miditra ry zareo. Savain'i Major ny entan'izy ireo. Manontany azy i Jesús Jank raha toa araka ny lalàna izao, ary mamaly i Major fa azy ny fanapahankevitra: nalainy araka izany solosaina finday an'ilay mpakasary. “Tsy ilaina miteny mikasika izao raharaha izao na amin'iza na amin'iza”, hoy izy, ary dia mihatokatoka ny tompontrano. Eny an-dàlana niverina, miresaka fisandohana andraikitra i Major, fandikandalàna iray anenjehana ireo izay manao asa iray voafaritra nefa tsy manana ny fahaizamanao maha-matihanina momba izany. Aminy, rehefa tsy vitan'i Jesús Jank ny manome antontan-taratasy manamarina ny maha-mpanao gazety azy miankina aminà rantsam-panjakana iray voafaritra, tsy afaka manao ny asa fanaovana gazety izy, ary mifandray amin'izay, manitsakitsaka ny lalàna izy. Ny zavatra iray hafa mety hitranga, hoy izy, dia ny Antoko eo an-toerana mety hanome fahazoandàlana azy, saingy noho ny zavamisy hoe tsy hahazo mihitsy ny fahazoandàlana tahaka izany ireo gazety tsy miankina ao Kiobà, ny hany vahaolana tokana dia ny tsy fiasàna, izany hoe, ny tsy fisiana.
Ankehitriny, any an-tànan'ny polisy ny solosaina finday sy ny fakantsary, ary mitorevaka mipetraka efa mandritra ny ora maro ireo mpanao gazety. Mivezivezy eo ny Major Damián. Miakatra any ambony rihana any izy miaraka amin'ny Major Nelson, ka ora iray aty aoriana dia miantso ireo mpanao gazety mba hampahafantatra azy ireo momba izay fandalinana vitan-dry zareo sy ireo dika nataon-dry zareo avy amin'ireo antontan-kevitra voatahiry tao anatin'ireo fitaovana elektronika, na momba ny asa izany, na momba ny fiainan'ny tena manokana. Alohan'ny namotsorana azy ireo, baikoan'i Major Damián ilay polisy mpiandry raharaha mba hanao fitanana an-tsoratra fampitandremana ho an'i Jesús Jank; dimy minitra mialoha izany, efa norahonany izy hoe hoentina miverina (sic) raha miziriziry tsy hiara-hiasa, satria nampiasa loha ilay mpanao gazety ny momba izay hiafaran'ireo vaovao nangoniny izay, ambonin'ny zavatra rehetra, efa nofafàna daholo.
“Manaiky aho ny tsy hanao antsafa intsony satria tsy manana ny fahazoandàlana hanao izany”, hoy ny voalazan'ilay antontan-taratasy nasain-dry zareo nosoniaviny. Manazava i Jesús Jank hoe mahazo alàlana izy satria manana diplaoma maha-mpanao gazety saingy, na ho inona na ho inona, tsy manàna alàlana. Isisihan'ilay polisy ny momba ny hoe tsy manana alàlana hanao izany izy satria tsy manana karatra maha-mpanao gazety. Soratany ny hoe tsy mahazo alàlana izy — tsipihany ny hoe ‘alàlana’ — tao anatin'ilay fitànana an-tsoratra, nasiany sonia dia naveriny.
Ireo rehetra miasa ao amin'ny Periodismo de Barrio dia manana alàlana tsara daholo hanao ny asany. Tamin'ny 2008 i Ramatoa tale Elaine Díaz Rodríguez, no nahazo ny lisansa momba ny asa fanaovana gazety, ary ny “maîtrise en communication” tamin'ny 2014 tao amin'ny oniversiten'i La Havane. Ny talen'ny fanoratana Tomás Ernesto Pérez dia nahazo ny dipalaomany tao amin'ny Fakiolten'ny Zavakanto sy ny Haisoratra tao amin'ny Oniversiten'i La Havane (2013); Geisy Guía Delis, Julio Batista Rodríguez, Ismario Rodríguez Pérez ary Jesús Jank Curbelo nivoaka nahazo diplaoma tao amin'y Fakiolten'ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversiten'i La Havane tamin'ny 2014, 2013 sy 2016. Mivoaka amin'ny gazety ao an-toerana sy eny anaty gazety iraisampirenena toy ny The Guardian, New York Times, Univisión Noticias, Al Jazeera, Taz, ankoatra ireo maro hafa, ny lahatsoratra soratan-dry zareo. Ary na ohatra aza ry zareo tsy manana ny fahaizamanao lazaina fa hahafahana mitoky aminy, ny traikefany efa voahangon-dry zareo dia ampy hanomezana alàlana azy hanao io asa io.
Kanefa, rehefa mahita io fampitandremana io, azo samborina ilay mpanao gazety Jesús Jank Curbelo raha toa mbola manohy manao ny asa fanaovana gazety. Mety hiharan'ny sazy fampidirana am-ponja mihitsy aza.
Tamin'ny folo ora alina, tanaty erikerika manify, natoron'i Major Nelson an'ilay mpakasary ny fomba hodiana an-tongotra hankany amin'ilay tranom-bahiny ary i Major Damián, tena hoe toy ny ray mpiahy, miteny amin'i Jesús Jank fa tsaratsara kokoa ho azy ny misoroka izay mety ho olana, ary miaro ny zanany lahy.
Navoaka miaraka amin'ny fanomezandàlan'ny Periodismo de Barrio. Raha hamaky ny lahatsoratra niaingàna dia ato. [esp]
Ity tantara ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Netizen Report an'ny Advox, tetikasa an'ny Global Voices natao hiarovana ny fahalalahan'ny fanehoana hevitra sy hiadiana amin'ny sivana anaty tambajotra.